မျှောဆရာဂိမ်း Em Emulator.Online မှ ဝင်၍ ပျော်မွေ့ပါ
မျှောဆရာ။ ၎င်းသည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသောဂိမ်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ယုတ္တိဗေဒနှင့်မှတ်ဥာဏ်နှင့် Spatial ကျွမ်းကျင်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် ၎င်း၏သမိုင်း, ၎င်း၏မျိုးကွဲနှင့်မည်သို့ကစားရန်။
Sorcerer Game: တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဘယ်လိုကစားရမလဲ။ 🙂
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရိုးရိုးလေးပါမင်းသားဂိမ်းကိုအခမဲ့ကစားရန် ဤအအဆင့် -by-step ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာပါ :
အဆင့် 1 ။ သင်နှစ်သက်သောဘရောက်ဇာကိုဖွင့ ်၍ ဂိမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားပါ Emulator.online.
အဆင့်2။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကို ၀ င်သည်နှင့်ဂိမ်းကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပြသပြီးပြီဖြစ်သည်။ သင်ရုံကိုနှိပ်ပါ ကစား သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဖွဲ့စည်းမှုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ 🙂
အဆင့် ၃ အသုံးဝင်သောခလုတ်အချို့ဖြစ်သည်။ သင်လုပ်နိုင်သည် " အသံထည့်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပါ "ကိုနှိပ်ပါ" ကစား "ခလုပ်နှိပ်ပြီးကစားပါ။ ခေတ္တရပ်ဆိုင်း "နှင့်" ပြန်စတင်သည် "အချိန်မရွေး။
4 အဆင့်။ ဂိမ်းကိုအနိုင်ရဖို့ပန်းသီးတွေအားလုံးကိုစားပြီးနံရံဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိဘဲစားရမယ် ။ ပွဲအဆုံးတွင်ရမှတ်အများဆုံးရရှိသောသူသည်အနိုင်ရလိမ့်မည်။
မွှေ-type အမျိုးအစားများသည်သူတို့၏ရိုးရိုးရှင်းရှင်းကစားနိုင်မှုနှင့်အလွန်ပျော်စရာကောင်းခြင်းတို့ကြောင့်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်။ Sorcerer သည်ဤလက္ခဏာများအားလုံးနှင့်ကိုက်ညီသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
မှော်ဆရာသည်တုတ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်ကွင်းတစ်ချောင်းပေါ်တွင်ရောင်စုံဘောလုံးများကိုလွှင့်ပစ်လိုက်သည်။ စုန်း၏မစ်ရှင်သည်ဘောလုံးများအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားစေရန်ဖြစ်သည် သူတို့နောက်ဆုံးအပေါက်မရောက်မီ။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်ကွင်းဆက်မှပေါက်ကွဲ။ ပျောက်ကွယ်သွားပြီးသင်၏ရည်မှန်းချက်ပြည့်မီစေရန်သင်သည်တူညီသောအရောင်သုံးခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောဘောလုံး ၃ ခုထက် ပို၍ ပေါင်းရမည်။
ဘောလုံးကွင်းဆက်ကိုဖျက်စီးရန်ရည်ရွယ်သည့် Sorcerer ကဲ့သို့သောဂိမ်းများကိုရောင်စုံပူဖောင်းများကိုသတ်မှတ်ထားသောနေရာမှပစ်လိုက်ခြင်းအား ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင်ဖန်တီးခဲ့သည်။
ပရိသတ်သည်ကလေးများဖြစ်သည်။ ဒါဟာတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည် ကလေးကစားနည်း ယင်း၏ယန္တရားသည်ရိုးရှင်းပြီးအရောင်များကိုကလေးများအားလုံးနှစ်သက်ကြသည်။ ဒါပေမဲ့ အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲကလေးများသာကစားချင်သည်။ လူကြီးများလည်းဒီဂိမ်းကိုချစ်၏ ။ ၎င်းကိုတီထွင်ဖန်တီးသူများကအံ့အားသင့်စွာဖြင့်အံ့အားသင့်ခဲ့ကြပြီးထိုအကြောင်းအရာနှင့်အတူထပ်တူပုံစံများကိုဖန်တီးခဲ့ကြသည်။
၎င်း၏အလွန်လူကြိုက်များမှုဖြစ်နိုင်သည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည် ကွန်ပျူတာကတဆင့်ကစားခဲ့သည် အဆိုပါအရာတစ်ခုကိုဝယ်ယူပြီးနောက်, ဒါကြောင့်တစ် ဦး pc ဂိမ်းထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာကြီးကျယ်တဲ့တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဂိမ်းကိုကိုယ်ထိလက်ရောက်ဝယ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
င်း ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်း ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းကို console များ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များနှင့်တောင်မှမည်သည့်စက်ပစ္စည်းတွင်မဆိုကစားနိုင်သည် အွန်လိုင်းစာမျက်နှာများမှတဆင့်အခမဲ့။
ရှုပ်ထွေးသောသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးသောဂရပ်ဖစ်လိုအပ်ချက်များမပါ ၀ င်ပါက၎င်းသည်ရိုးရှင်းသော၊ စိန်ခေါ်မှုနှင့်ဖျော်ဖြေမှုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
မျှောဆရာဂိမ်းတစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ် ရောင်စုံဘောလုံးဂိမ်း ။ သင်က Bubble ဂိမ်းများအဖြစ်လည်းသိနိုင်သည် ပူဖောင်းသေနတ်သမား နှင့်ရည်မှန်းချက်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်, ပူဖောင်းများအားဖြင့်အရောင်ဘောလုံး၏ကွင်းဆက်သို့မဟုတ် sequence ကိုဖကျြဆီး။ သငျသညျတူညီသောအရောင်သုံးခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအတူတူသောအခါ, သူတို့ဖယ်ရှားပစ်ပါသည်။
ဒါဟာတစျဦးဖွစျသညျ အကျော်ကြားဆုံးပူဖောင်း ။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းသည်ဘောလုံးကွင်းဆက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်မျက်နှာပြင်၏မျက်နှာကျက်တွင်ဘောလုံးများသည်စုဆောင်းပြီး၎င်းတို့ကိုသူတို့မြေပေါ်သို့မဆင်းမီသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရမည်။
အလွန်ပူပြင်းတဲ့ပူဖောင်းဗီဒီယိုဂိမ်းနောက်ထပ်ဂန္ထဝင် ရိုးရှင်းပေမယ့်အစာရှောင်ခြင်းစနစ် မင်းကစက်ကိုမင်းကိုမရိုက်စေချင်ဘူးဆိုရင်မြန်မြန်စဉ်းစားစေတယ်။
အဆိုပါပူဖောင်းတစ်လိမ်န်းကျင်လည်ပတ် အဲဒီဗဟိုမှအန္တရာယ်ရှိတဲ့အနီးကပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသို့မဖြစ်စေရန်သင်သည်ပူဖောင်းများကိုကွင်းဆက်ထဲသို့မိတ်ဆက်ရန်လိုသည်၊ အုပ်စု ၃ ဖွဲ့သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသောအုပ်စုများကိုပိုမိုတိုအောင်လုပ်ရန်လိုသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ချည်နှောင်ခြင်းတစ်ခုမှတစ်ခုပြီးမြောက်သွားပါက၊ သင်သည်ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး ပို၍ ခက်ခဲသောနောက်အဆင့်သို့သွားလိမ့်မည်။ အရောင်အမျိုးမျိုးသောမြွေကိုအနိုင်ယူနိုင်လိမ့်မည်လား။
ဤကိစ္စတွင်, ပြုပြင်မွမ်းမံရှိပါတယ်နှင့်အချက်ဖြစ်ပါသည် အဆိုပါပူဖောင်းတူသောပုံဖော်နေကြသည် ကွဲပြားခြားနားတဲ့ အသီးအပွ , သင်ကသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်နှင့်မျက်နှာပြင်ရှင်းလင်းဖို့3သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအုပ်စုများအတွက်ပူးပေါင်းရန်ရပါလိမ့်မယ်။
သို့သော်၊ ဤဂိမ်းတွင်ထူးခြားသောအချက်အနည်းငယ်ရှိသည်။ ဥပမာ, အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှပူဖောင်းများကျလာသည် ဒါကြောင့်သင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်မတုံ့ပြန်ဘူးဆိုရင်ဂိမ်းရဲ့အဆုံးမှာသင်ထင်ထားတာထက်အများကြီးစောပါလိမ့်မယ်။
ပြီးတော့မင်းကပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ colorblind mode ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ အရောင်များကိုပြောင်းလဲပြီးသင်ပိုမိုလွယ်ကူစေနိုင်သည်။
ဂိမ်း၏စည်းကမ်းများ Sorcerer 📏
ငါတို့လုပ်ရမယ် ဘောလုံးကိုမှန်ကန်သောနေရာသို့ပို့ရန်အတွက် Magician ၏ ၀ န်ထမ်းများကိုအသုံးပြုပါ ကွင်းဆက်၌။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာအနည်းဆုံးတူညီသောဘောလုံး ၃ လုံးရှိသောအုပ်စုတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာထိုဘောလုံးများသည်ကွင်းဆက်မှပျောက်ကွယ်သွားပြီးယင်းကကြီးထွားလာခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။
သင် .. လုပ်ရမည် သူတို့အဆုံးမရောက်မီအားလုံးဘောလုံးကိုဖယ်ရှားပစ် လမ်းကြောင်း၏နှင့်အပေါက်မှတဆင့်ချော်။
အလျင်အမြန်သွားသောကြောင့်အလျင်အမြန်! ဂိမ်းဖြည့်စွက်ရန်ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်3ရှိပါတယ်။
မျှောဆရာ၌အလွန်ရှုပ်ထွေးသည့်စည်းမျဉ်းများမရှိပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်ပျင်းစရာဂိမ်းဖြစ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ တကယ်တော့သင်မလုပ်ဘူးဆိုရင် ဒီအကြံဥာဏ်တွေကိုယူပါ အဆင့်ဆင့်၌မှီဝဲရနိုင်ပြီးသူတို့မသွားနိုင်ပါ။
ဤအရာသည်သင်တို့အားပထမ ဦး ဆုံးသောအကြံဥာဏ်ဖြစ်သည်။ ပထမတော့သူကရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘူးလို့ထင်ရပြီးသင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်အဆင့်ကိုကျော်သွားလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘူး! မင်းမြင်ချင်တဲ့အခါ ဘောလုံးကွင်းဆက်သည်အလွန်ကြီးမားပြီးလျင်မြန်စွာသွားသောကြောင့်၎င်းကိုဖယ်ထုတ်ရန်အချိန်မရှိ ပြီးတော့သင်ရရှိသမျှအားလုံးသည်ရောင်စုံဘောလုံးများကိုမှားသောနေရာများတွင်ထားရန်ဖြစ်သည်
ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့ရည်မှန်းထားတယ်ဆိုတာငါတို့သိပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့်ဘယ်ဘောလုံးတွေကိုအရင်ဖယ်မလဲ။
သင်တတ်နိုင်သမျှ ကွင်းဆက်၏ ဦး ခေါင်းကနေဘောလုံးဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အချင်းမပြည့်မှီမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်တွင်းထဲသို့ပထမဆုံးရောက်ရှိနိုင်ကြောင်းသတိရပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ရှောင်ရှားလိုသောအရာဖြစ်သည်။
ဒီအလိုအလျောက်ဖျက်ခြင်းကဘာလဲ။ မှော်ကနေစာလုံးပေါင်းအချို့ကိုမျိုး? ကောင်းပြီ၊ ဒါကရှိခြင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်လိမ့်မည် မဟာဗျူဟာ။ ဒါကိုသေချာအောင်လုပ်ရမယ် ကွင်းဆက်မှအရောင်ကိုဖယ်ထုတ်သည့်အခါတူညီသောအရောင်သည်အဆုံးသတ်နှင့်လိုက်ဖက်သဖြင့်ပထမတစ်ခုပျောက်သွားသည့်အခါသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖယ်ထုတ်ပစ်သည်။
အရမ်းရှုပ်ထွေးလား ငါနင့်ကိုပေးတယ် ဥပမာ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကွင်းဆက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါအစီအစဉ်ရှိသည် - အဝါရောင်၊ lilac၊ lilac၊ အဝါရောင်၊ အဝါရောင်၊ အပြာ၊ အစိမ်း၊ အဝါရောင် ...
lilac ဘောလုံးကိုစတင်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာသည် lilacs နှစ်ခုကြားတွင်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကအတန်းကနေ lilac အရောင်ဖယ်ရှားပစ်? နောက်ဖြစ်ပျက်လာမည့်အရာမှာအဝါရောင်အရောင်အတူတကွလာသောအခါအဝါရောင်ဘောလုံးသုံးခုတိုက် မိ၍ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီဂိမ်းဗားရှင်းကိုကြိုက်လား။ လုပ်ခဲ့တယ် ဒီလှည့်ကွက်များကသင့်ကိုကူညီပါ ? သင်မြင်သည့်အတိုင်းဂိမ်းများစွာနှင့်ပျော်မွေ့ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည် မျှောဆရာ။